Deni oo ku dhawaaqay musharraxnimo uu muddo qarinayay | KEYDMEDIA ENGLISH
Deni oo ku dhawaaqay musharraxnimo uu muddo qarinayay
Siciid Deni oo ku fashilmay inuu nabad iyo xasillooni ku maamulo labo gobol, ayaa u tafa-xeytay inuu maamulo Soomaaliya oo dhan, taasoo ay durba ka dhasheen weydiimmo xooggan.
GAROWE, Soomaaliya - Madaxweynaha Maamulka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa ugu danbeyn ku dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada xilka ugu sarreeya dalka, kadib manaasabad xalay ka dhacday xarunta maamylkaas ee Garowe.
Deni, ayaa shaacinta musharrax-nimadiisa kusoo aaddiyay, kadib markii uu soo gabagabeeyay xulashada 37 kursi oo Golaha Shacabka iyo 11 kursi oo Aqalka sare ah, kuwaasoo uu u boobay shaqsiyaad uu isagu wato, si uu u helo guud ahaan cododka Garowe iyo Boosaaso.
Sida ka muuqatay hadal kooban oo uu jeediyay, Deni, ayaa ololihiisa ka dhigtay, dagaal ka dhan ah Farmaajo, si uu u helo dareenka dadka is beddel doonka ah ee ka soo hor-jeeda soo laabashada Kooxda hadda sharci darrada ku joogta Madactooyada.
Siciid Deni, ayaa hore loogu eedeeyay hannaankii uu ku maamulayay Puntland, kaas oo sababay dagaallo kharaar oo ka dhacay magaaladda dekedda leh ee Boosaaso iyo taag-taag siyaasadeed oo ilaa hadda ka taagan guud ahaan degaannada maamulkaas.
Deni, ayaa la fahansan yahay inuu yahay nin aan caradiisa qarsan karin, isla-markaana aan u dulqaadan karin doodaha ka dhanka ah isaga, waxaana la xasuustaa, hab-dhaqankiisii labo sano ka hor ee xarunta Baarlamaanka Puntland.
Sida ay sheegayaan dadka yaqaanna Madaxweynaha Puntland, Siciid, waa shaqsi jecel in tiisu meel marto oo aan hadalkiisa hadal la dul-saarin, taas oo ka dhigan inuu yahya kali-talis kale oo u socda Madaxtooyada kadib Madaxweynihii hre Farmaajo
Deni, wuxuu ka mid ahaa musharixiintii ka qeyb qaatay doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya ee 2017, waxuuna xilligaas helay 18 cod, oo la micno ah inuu ku haray wareeggii 1-aad ee tartanka, haddase wuxuu ka mid yahay musharixiin codod xooggan ku tashanaya.
Deni, wuxuu si weyn uga soo hor jeeday Farmaajo, wuxuuna is-baheysi la lahaa Madaxweynaha Juballand Axmed Madoobe, kaas oo hadda ilo xog ogaal ah sheegayaan inuu dhisayo musharraxnimada Siciid Dini.